Ankizy Miaramila Ao Amin’ny R.D.Kongo · Global Voices teny Malagasy
Ankizy Miaramila Ao Amin'ny R.D.Kongo
Voadika ny 25 Oktobra 2017 11:59 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2005)
WITNESS (VAVOLOMBELONA) – Ankizy Miaramila ao amin'ny R.D.Kongo
Nanomboka tamin'ny 1996, nandravarava ny Repoblika Demokatrikan'i Kongo ny ady. Teo amin'ny olona efatra tapitrisa teo no maty noho ny ady mitam-piadiana nisy ary ankizy mihoatra ny iray alina no nampiasaina ho toy ny miaramila. Ankehitriny, ao anatina tetezamita marefo ny firenena, miaraka amin'ny vondrona mitam-piadiana mihoatra ny folo izay mbola miasa amin'ny faritra Atsinanana. Samy nanangona sy nampiasa ankizy ho miaramila daholo ny ankolafy rehetra, izay mandika ny lalàna iraisam-pirenena momba ny maha-olona sy ny zon'olombelona.
Tamin'ny 2004, nanambara ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna ao amin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena momba ny Heloka Bevava (ICC) fa i R.D.K no ho fanadihadiana voalohany ataon'ny Fitsarana. Eo ambanin'ny fanamelohan'ilay Fitsarana ho toy ny heloka bevava an'ady ny fanangonana sy fampiasana ankizy miaramila. Ny ICC irery sisa no Fitsarana mahefa sady tsy manavakavaka izay afaka mitondra ny rariny ho an'ireo ankizy an'arivony izay nohitsakitsahana ny zony ary nosintomina tamin'izy ireo ny fahazazany.
Tamin'ny alalan'ny feon'ireo ankizy miaramila, mamakivaky ny fahasarotan'ny ady ny ”Adidy mba Hiaro”, ny olana natrehan'ny ankizivavy miaramila ahitana ny fanolanana sy ny fitrandrahana ara-nofo sy ny lanjan'ny Fitsarana Iraisam-pirenena momba ny Heloka Bevava mba hampitsaharana ny tsimatimanota ao R.D.K Atsinanana. Manome sosokevitra hanamafisana ny asan'ny ICC ny lahatsary ary miantso ny fandraisan'ny fiombonambe iraisam-pirenena mba hanakana ny fanangonana sy fampiasana ankizy miaramila.
Fikambanana goavana ny Witness ary mampiseho ny fomba ahafahan'ireo mpanelanelana toy itony manampy amin'ny fivoahan'ny feo ho ren'izao tontolo izao ary ohatra tsara ihany koa amin'ny fampiasana ny lahatsary ho toy ny fitaovana fampitam-baovao.
3 andro izayNizeria
1 herinandro izayMozambika
2 herinandro izayEritrea
09 Novambra 2015Azia Afovoany sy Kaokazy
‘Ahoana no Inoantsika Hoe Tsy Anjarantsika Rahampitso?': Fahafahambaràka Amin'ny Fitorahana Ilay Tovovavy Afghana 19 Taona‘